Sunday, 19 January 2020, 13:38
This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia -	https://wn.com/Reserve_Bank_of_Zimbabwe
Latest News for: reserve bank of zimbabwe
JOHANNESBURG - JSE-listed Nampak will receive $57million (R800.54m) from the Reserve Bank of Zimbabwe in settlement of a legacy debt it is owed by its Zimbabwe unit and which has been transferred to the central bank after Harare re-introduced the Zimbabwean dollar and disallowed usage of foreign currencies for local transactions....
INTERNATIONAL – London-based grain and fertiliser exporter, Holbud Limited, has approached the High Court seeking a court order to register a US$27.5 million (R396m) arbitral award granted against the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) in November 2018 ... “As a paying agent of the ......
SA tycoon sues 'corrupt' Reserve Bank of Zimbabwe for R1.9bn
Johannesburg - The cash-strapped Zimbabwean economy looks set for a further battering following a staggering R1.9 billion lawsuit against the “corrupt” Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) filed by the embattled country’s biggest gold producer ... of what the company was apparently owed....
Harare — Zimbabwean miner RioZim is demanding $92m from the Reserve Bank of Zimbabwe in a lawsuit brought to force the central bank to pay for more of its gold purchases from the company in dollars, court documents show. Miners are struggling as Zimbabwe grapples with an acute shortage of dollars....
The Coin Telegraph 06 Jul 2018
The Reserve Bank of Zimbabwe has started studying distributed ledger technology in order to deploy it in the bank’s business practices .......
The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) has filed an affidavit with the country’s High Court seeking to have the court uphold its decision to shut down the country’s largest crypto exchange, Golix.com. The RBZ filed the affidavit through its governor, John ... ....
The Reserve bank of Zimbabwe (RBZ) issued rules of thumb in a circular on May 13 that detailed that all cryptocurrency activities carried out in the country were being stopped ... Zimbabwe registered record rates for bitcoin and other cryptocurrencies in 2017 after the ......
Golix contests Reserve Bank of Zimbabwe(RBZ) Ban on Cryptocurrency. Reserve Bank of Zimbabwe in it’s recent order had instructed all financial institutions to stop all forms of cryptocurrency transactions ... Earlier Zimbabwe Information and ... Ban Golix RBZ Reserve Bank of Zimbabwe ZICT....
The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) is facing a lawsuit from a cryptocurrency exchange in the African country following the RBZ’s recent order to all registered financial institutions to stop all forms of cryptocurrency trading. The central bank also ... ....
On May 13 2018, the Reserve Bank Of Zimbabwe (RBZ) issued guidelines in a circular that detailed cryptocurrency activities taking place within the country are now banned ... The Reserve Bank of Zimbabwe released a circular which effectively banned cryptocurrencies this month....
Helena Bitcoin Mining 14 May 2018
Although bitcoin is widely-regarded as a lucrative investment vehicle, and it is easy to forget the original function of the pioneer cryptocurrency; that of being a decentralized store of value ... citizens of countries with weak economic systems have much to fear when their ......
HARARE, May 14 (Xinhua) -- The Reserve Bank of Zimbabwe has directed all banking institutions not to provide banking services to facilitate anyone dealing with or settling virtual currencies and once again warned the public against trading in cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin saying that they risked losing their investments....